कोरोनो सं’क्रमण जितेकी शान्ता चौधरीले गरिन यस्तो खुलासा ! के हो त कोरोना भाइरस ? - jagritikhabar.com
कोरोनो सं’क्रमण जितेकी शान्ता चौधरीले गरिन यस्तो खुलासा ! के हो त कोरोना भाइरस ?
नेकपा सचेतक शान्ता चौधरीले कोरोना सं’क्रमणलाई पराजित गरेर पुनर्जीवन पाएको बताएकी छन् ।
विगतमा स्तन क्यान्सरबाट समेत पीडित भएकी चौधरीलाई गत १९ असोजमा कोरोना सं’क्रमण पुष्टि भएको थियो । उनी बीर अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएपछि उनलाई २३ असोजमा आईसीयूमा राखिएको थियो ।
‘पुराना रोग हुनेहरुलाई बचाउन गा’ह्रो पर्छ भन्ने सुनिरहेकाले पनि बाँच्छु जस्तै लागेको थिएन,’ उनले लेखेकी छन्, ‘‘आज कोरोना निगेटिभ भएको नतिजा आयो । लाग्यो मैले पुनर्जीवन पाएँ ।
१९ दिनको अस्पताल बसाइ र त्यसमा पनि अधिकांश समय आइसियूमा छट्पटिनु पर्दाको पी’डा वर्णन गर्न नसक्ने उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
‘उहाँहरुले मृ’त्युको मुखबाट बाहिर निकालेर मलाई पुनर्जीवन दिनुभो । बेलाबेलामा हौसला दिइरहनु भयो । विशेष विशेष हेरचाह गर्नु भयो र आज म यो स्टाटस लेख्ने अवस्थामा फर्कें । उहाँहरूका लागि मेरा शब्दका धन्यवाद अपुरो होला,’ चौधरीले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।